Kuningi izitsha esihlwabusayo ezithakazelisayo ungakwazi ukupheka nge amakhowe. Amakhowe asetshenziswa salads appetizers, izitsha main futhi Julien. Lungiselela ngisho ophaya amakhowe. Ziyakwazi isithako elimnandi enikeza iyiphi isidlo ukunambitheka eyingqayizivele zazo.
Iningi cishe iresiphi kangcono mushroom isobho - isobho amakhowe porcini. Kodwa kuyinto ngokulinganayo okumnandi mushroom isobho ingalungiswa kusuka kwamanye isikhunta: abasha e-aspen, boletus, oyster, amakhowe kanye nabanye. Nokho, isobho porcini ungachazwa ukuthi umhluzi kuzo akusho mnyama. Ukulungiselela mushroom isobho is arcade kwenziwa ngaphambi nje kokuba ukusetshenziswa, njengoba ngisho emva Ukushisa isobho engcono ukulahlekelwa ukunambitheka kwabo.
Ngaphambi ukupheka mushroom isobho, udinga ukupheka umhluzi amakhowe. Kungaba ukupheka hhayi kuphela fresh, kodwa futhi kusukela amakhowe omisiwe. Ukulungisa benomhluzi amakhowe omisiwe, udinga ukuthatha ukuba 40 amagremu ngamunye ezimbili amalitha amanzi. Amakhowe kufanele kahle wageza ngamanzi afudumele, bese bevala ngamanzi abandayo wasiqashisa ume imizuzu 45. Khona-ke ukususa amakhowe futhi bayeke futhi kuso futhi ugcwalise ezimbili amalitha amanzi abandayo. Isigamu sehora noma amakhowe ezimbili sikhukhumale badinga ubilise manzi kuze ithenda.
Ukuze ukulungiselela benomhluzi amakhowe fresh zidinga 800-900 amagremu isikhunta ezimbili amalitha amanzi. amakhowe Fresh kufanele ahlanze, engahashazanga ngamanzi abandayo enosawoti futhi upheke kuze ithenda. Umhluzi amakhowe kuphekwe zingafundwa futhi ulungiselele ukuba sauce.
iresiphi ejwayelekile mushroom isobho.
Sidinga ukuthatha 30 amagremu of amakhowe omisiwe, omunye medium anyanisi, eyodwa isanqante esincane, ithisipuni elilodwa likafulawa, kweqembu dill kanye parsley. Amakhowe ofakwe amanzi, khona-ke sibe yimichilo, okufanayo uthele amanzi, ulethe ku-ngamathumba futhi ibila. Ngemuva kwemizuzu engu-20-30 ukupheka, engeza izaqathe, sibe yimichilo kanye anyanisi oqoshiwe, engeza usawoti ukunambitha futhi upheke kuze ithenda. Ngemva gazinga ukupheka ngamafutha yemifino kanye ufulawa isobho ukugcwalisa. Ngaphambi sikhonza isobho abafafazwe imifino oqoshiwe.
Kukhona iresiphi mushroom isobho nge amazambane amadombolo.
Ukuze wenze lokhu kuthatha amagremu 100 of amakhowe omisiwe (ungayithola enye amakhowe fresh), 2-3 amazambane amaqanda 2, ufulawa, 2-3 wezipuni. Oku-kuphekwe mushroom umhluzi. Khona-ke ukulungiselela amazambane amadombolo. Amazambane kuphekwa salokhu. Khona-ke kudingeka ukuba yokwelula, ukushayela eluhlaza amaqanda, nigcwalise ufulawa nosawoti uhlanganise kahle. Ngemva kwalokho, amazambane amadombolo yakha amathisipuni amabili bese ubabeke ngqo abilayo isobho. Isobho upheke kuze kuphekwe bese ufafaze imifino oqoshiwe.
Kuvele iresiphi ezithakazelisayo mushroom isobho - isobho nge mushroom amadombolo.
Thatha 20 amagremu of amakhowe omisiwe, isigamu anyanisi, ezintathu wezipuni kafulawa, eyodwa egg, omunye isipuni ibhotela, usawoti kanye pepper ukunambitha. Amakhowe Bilisa amanzi anosawoti, abakhwabanisi ugaye e-grinder inyama. Khona-ke Fry in ibhotela oqoshiwe onion, azihlanganise amakhowe, okuluhlaza amaqanda isikhuphasha kwezingqimba ezinkulu ezinyakazayo.
Ingxube kwaphumela uthele ufulawa, uthele kancane mushroom umhluzi ngesiswebhu iqanda omhlophe, uhlanganise kahle. Engeza usawoti kanye pepper ukunambitha uhlanganise kahle okwesibili. uzilungiselele Ngakho inhlama ukuthatha ngesipuni futhi ayifake abilayo mushroom umhluzi. Ngemva kwalokho ubilise imizuzu 10-15. Ekupheleni ukupheka, engeza ku-bhotela isobho.
Indlela Yokuthola mushroom isobho nge ukhilimu.
Sidinga ukuthatha 400 amagremu of amakhowe fresh, isipuni kafulawa, eyodwa isipuni bhotela, isigamu inkomishi ukhilimu kanye anyanisi green. Amakhowe ugcwalise 1.5 litre amanzi ukuba nithele umhluzi amakhowe kanye lemifanekiso. Fry in ufulawa ibhotela. Bese wengeza amakhowe kuya umhluzi, ufulawa, thumba. Ekupheleni, engeza ukhilimu futhi inkathi ngosawoti ukunambitha. Khonza fafaza ungcwecwe ngengxube oqoshiwe anyanisi oluhlaza.
Isobho okuzenzela asterisk
Paustovsky: izindaba mayelana nemvelo. Paustovskogo usebenza ngemvelo